နံရံကပျကျွွောငာ 12.07.2018 12.07.2018 မိသားစုနှင့်နေအိမ်
ချစ်ရသူတစ်ဦး၏သစ္စာဖောက်ခြင်း, ငါတို့နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုမှတူညီ။ မကြာခဏမအဘို့အဆင်သင့်။ ဒါဟာကသူ၏ခြေအောက်၌ကနေမြေပြင်ကိုလျှော့ချသည့်အဖျက်ခံစားချက်များကိုနှင့်အကျိုးဆက်များကိုသယ်ဆောင်။ ကျွန်တော်တို့သည်ယုံကြည်မှုနှင့်မေတ္တာဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေသစ္စာဖောက်အပေါင်းတို့နှင့်တဦးတည်းသကျသုတ်ထဲမှာဖြတ်သန်းသွားသည်ပါတယ်။ နှင့်ယေဘုယျ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်အတူတူ။
ပြောင်းလဲပစ်ခှငျ့လှတျဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား? အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသောအဖြေသို့မဟုတ်အကွံဉာဏျရှိနိုငျပါသညျ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ချစ်ရသူ၏ခံစားခကျြမြားနှငျ့ trifle မဖြစ်သင့်, ငါသည်စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးက Anna Kiryanov သေချာပါတယ်။
နှင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာ၏သစ္စာဖောက်သည်းခံရ၏နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ရှိပါက; ကဖြစ်ပျက်။ နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း - သူတော်ကောင်း။ ကလေးများကမိသားစုတစ်ဦး, ကောင်းသောအားကောင်းတဲ့, ရဲရင့်ပေးကိုချစ် ... နှင့် Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့သူမ၏ခင်ပွန်းကိုချစ်၏အဖြစ်သူ့ကိုချစ်ကြတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကိုမယုံကြည်ခြင်း, လက်ထပ်; သူမသည်ကလေးခြောက်ယောက်ကိုဘွားမြင်လေ၏; ငါချစ်နှင့် adored ။
ပြီးတော့ငါအတွင်းရေးမှူး Lucy ကနေမတ်ေတာသအက္ခရာများသူမ၏ခင်ပွန်းဗူးများ၏ပင်စည်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိန်းမသည်သိနားလည်ကြ၏။ မြေယာသည်သူ၏ခြေအောက်၌ထံမှသူမ၏ထားခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကကြောက်မက်ဘွယ်သောထိုးနှက်! အရာအားလုံးပြိုကျ။ ကွာရှင်းသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ပြိုကျဆိုလိုပေသည် - သို့သော်သူမ၏ခင်ပွန်း, သားသမီး, နှင့်အထွေထွေအတွင်းကိုချစ်၏။ အထူးသဖြင့်သူ Lucy နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ကတိပြုခဲ့သည်။ နှင့်အထွေထွေအတွင်းသူသည်နောင်တ, နူးညံ့ခဲ့တယ်အိမ်ထောင်ရေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုခဲ့ ...
သူကလိမ်လည်လှည့်များနှင့်လျှို့ဝှက်စွာကြားဆက်ဆံရေးဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Eleanor သူမသိဟန်ဆောင်။ နှင့်အကြမ်းဖက်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုယူ။ ပရဟိတအလုပ်အတွက်စေ့စပ်အမျိုးသမီးများ, အနက်ရောင်ကလူများ၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပါ။ သူမသည်ထို့နောက်ပင်သန်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများနှင့်ဆုချီးမြှင့်ထား၏။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကြောင့်အရုပ်ဆိုးဖြစ်လေပြီတကား ဇိမ်ခံဆံပင်နှင့်အတူချစ်စရာမိန်းမငယ်, sable မျက်ခုံးနဲ့တောက်ပတဲ့မျက်လုံးသူမကဖြစ်လာသည် - ပင်ရေးသားဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ အလွန်အရုပ်ဆိုးအမြိုးသမီးတယျ။ သူ့ဟာသူ၏ရုပ်ပြောင်။ သူမကြင်နာ၏အန်တီနဲ့အသည်းအသန်ကိစ္စကဲ့သို့အစတင်ခဲ့ပြီး - ထိုအခါစွပ်စွဲမင်းသမီးများအတွက်ခံစားချက်တွေကိုပြသလာတယ်။ ထိုမိနျးမ Eleanor သူမကအဒေါ်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်တော်မူ၏ယခုဖြစ်ခဲ့သည်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဘယ်သူမျှမရှိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ခံစားချက်များကိုချိုးဖောက်နှင့်လှည့်ဖြားခဲ့ကြသောကြောင့် - သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ဆက်လက် Lucy နဲ့ဆက်သွယ်မှု, Lucy, ပြီးတော့လေဖြတ်ခံစားခဲ့ရတစ်မစ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသစ္စာဖောက် Roosevelt ရုစဗဲ့ပိုလီယိုခံစားခဲ့ရပြီးဘီးတပ်ကုလားထိုင်၌ရှိ၏။ ဘယ်ကသူ၏ဝတ္ထုနှင့်သစ္စာဖောက်မတားဆီးခဲ့ပါဘူး။
Eleanor အဲဒီမှာအမြဲခဲ့: လုံ့လရှိသူ, သစ္စာစောင့်သိ, သစ္စာနဲ့ဆိုးဆိုးရွားရွားရုပ်ဆိုး။ အားလုံးဆိုးတပါးလိုပဲ ... ထိုအခါ Roosevelt ရုစဗဲ့သည်သေ၏။ နှင့် Eleanor သူမတစ်ဦးတည်း ချစ်. ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ကနေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကမှုတ်။ သူကပြုတော်မူပြီသူ့ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့။ နှင့်မျှမကသူ့ကို မှလွဲ. လိုအပ်မခဲ့ - ခြင်းမရှိအဒေါ်, အဘယ်သူမျှမလေးများ ... သူမသည်, ဒီပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးရုံမခံမရပ်နာကျင်နှင့်အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ပါ - မခံမရပ်နာကျင်။ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို disfigures ။ , မလွှဲမရှောင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲသူများသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးခိုင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောဘုန်းတန်ခိုးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တောင်မှလျှင်, ကတုန်းပဲနှိပ်စက်တာ။ ငါတို့သည်တစ်နည်းနည်းနဲ့မှာအနည်းဆုံးအနည်းငယ်, မိသားစုမနှမြောရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်သူ၏စကားလုံးစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ် ...
← ကောင်းသောကလေးမွေးမြူဖို့ 10 နည်းလမ်းများ
infographics: သင်2နှစ်7ကနေကလေးတွေအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ →
categories အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါဗွီဒီယိုများ (45)Horoscope (2)ကနျြးမာရေး (85) ကနျြးမာရေးဆိ (21) မိခင်ကနျြးမာရေး (15)Interesnenkoe (233)အလှအပ (33) အစားအစာ (8) ဖက်ရှင် (10)မတ်ေတာသညျ (20) relationship (20)သားဖွား (54) ကိုယ်ဝန် (15) ပညာရေး (31)အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက် (3)Power က (18) မိခင်နို့တိုက်ကျွေး (2) Power ကသူနာပြုမိခင်များ (2) တစ်နှစ် (13) ထိလအားဖြင့်မွေးဖွားထံမှကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးခရီးသွား (4)ချက်ပြုတ်နည်း (1 163) ဒုတိယအဟင်းလျာများ (638) အချိုပွဲ (231) ပထမဦးစွာသင်တန်းများ (288)မိသားစုနှင့်နေအိမ် (60) လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi) (37)အိပ်မက် (38)